Seattle Public Schools » Departments » Advanced Learning » Translations for English Learners » Somali
U-diritaanka Qiimaynta Waxbarashada Sare
Waqtiga Gudbinta Tilmaanta Darasaadka Sare August 28keeda – December 7deeda, 2020
Important: Fall/Winter Testing Session 2020-2021 to determine eligibility for school year 2021-22
Dhamaan Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxaa ka go`an in ay bixiyaan adeeeg ah in ardayda ay helaan tilmaan waxbarasho si ay u gaaraan heerka laga doonayo , dhexgalka bulshada, shucuurta iyo akhlaaqda una baahan arday kasta iyo midkasta
Waad ku mahadsan tahay xiisaha aad u qabto Waxbarashada Sare. Sababo la xiriira COVID-19, howlaheena ayaa isbadalay. Waqtiga gudbinta ayaa furi doona Ogoosto 28-keeda, laakiin markaad gudbiso dib dambe laguma soo siin doono inaad doorato taariikhda imtixaanka. Maaddaama aan saadaalin karin goorta dib loo furi doono dugsiyadda, ama awooda ay dib u furi doonaan, ma awoodno inaan dejinno taariikhaha imtixaanka waqtigan.
Haddii aad soo gudbiso, waxaa lagula soo xiriiri doonaa emayl ku saabsan jadwalka imtixaanka marka lagu soo noqdo dhismayaasha. Waxaan eegaynaa dhowr nooc, oo ay kujirto imtixaanka Sabtida ee laba ama in ka badan oo goobta ah, ama imtixaan gudaha dugsiga ah haddii moodel nooc ah uu oggolaado. Labada doorasho midkoodna ma bilaaban doono ugu yaraan Janaayo 2021.
Dhammaan Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxaa ka go'an inay bixiyaan waxbarasho tayo leh oo loogu talagalay inay kaafiso tacliinta, bulshada, shucuurta iyo baahiyaha dabeecad ee arday walba.
Miyaan u dira ilmahayga qiimaynta aqoonta for evaluation for Waxbarashad Hrmarsan am Adeegyada Awoodda Sare u baahan?
Waaxda Tacliinta Sare waxaa ka go'an inay horumariso hibooyinka iyo awoodaha canug walba. Tixgeli tixraac canuggaaga si loogu qiimeeyo Waxbarashada Sare ama adeegyada Awoodda Sare leh haddii isagu ama iyadu ay muujinayaan awood aan caadi ahayn ama karti u leh inuu waxbarto iyo sabab ka sarreysa asaga ama asaageeda isku da'da ah.
Tusaale ahaan, canugaaga wuxuu ku muujin karaa awooda meelaha soo socda:
Hogaaminta, Hal-abuurka, Dhiirigelinta, iyo Barashada
Awoodo ka baxsan da'da isaga ama iyada isku fac ah:
Isaga ama iyadu waxaa laga yaabaa inuu yahay xiriiriye xoogan oo isku kalsoon isla markaana abaabuli kara isla markaana keeni kara qaabdhismeed xaaladaha.
Isaga ama iyadu waxay noqon karaan kuwo mala-awaal ah oo muujinaya karti ay ku la yimaadaan fikrado hal abuur leh iyo / ama xalal.
Isaga ama iyadu waxaa laga yaabaa inay muujiyaan baahi yar oo dhiirrigelin dibadeed ah oo ay u raacaan shaqada marka horeba xiisaha leh iyo / ama waxaa laga yaabaa inay u heellan tahay mashaariic muddo-dheer ah markii ay xiiseyneyso mowduuc
Isaga ama iyadu waxaa laga yaabaa inay hayaan bakhaar weyn oo macluumaad ah oo ku saabsan mowduuc gaar ah iyo / ama waxay had iyo jeer sameyn karaan fiiro gaar ah ama aragti
Ardaygaagu sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu muujiyo awoodaha gaarka ah ee aan halkan ku taxnayn oo aan si fudud loo qeexin.
Awoodaha ilmahaaga waxaa lagu muujin karaa fasalka gudihiisa ama dibadiisa.. Dhammaan awoodaha kor ku taxan waxaa laga yaabaa inay ka muuqdaan meelo iyo hawlo kala duwan, sida:
Shaqada maalinlaha ah
Markaad ku guda jirto mashruuc
Markaad ku mashquulsan tahay hiwaayad
Hawlaha dugsiga ka hor / kadib
Ardayda ku hadasha luqado kala duwan, awoodahan waxaa lagu soo bandhigi karaa luqad kasta..
Gudiga Xulista Kaladuwanaanta, ama MSC, (WAC 392-170-070) dib u eegi doonaa dhammaan caddeymaha la heli karo si loo go'aamiyo u-qalmitaanka adeegyada Awoodda Sare ama Adeegyada Waxbarashada Sare. Waaxda Waxbarashada Sare waxay la shaqeyneysaa saraakiisha gobolka iyo cilmi baarayaasha qaranka si loo sameeyo aqoonsi qorshe buuxiya shuruudaha sharciga gobolka iyo shuruudaha maxalliga ah ee baaritaanka iyadoo loo eegayo Covid-19. Qoysaska waxaa lala xiriiri doonaa ugu dambeyn Nofeembar iyadoo lala socodsiin doono wixii cusbooneysiin ah.
Fadlan ogow, waa wax iska caadi ah ardayda inay soo bandhigaan kartiyo gaar ah meelaha qaarkood ayna muujiyaan daciifnimo muuqata kuwa kale. Haddii ilmahaagu muujinayo awoodo gaar ah, fadlan tixgeli inaad u dirto isaga ama iyada qiimeyn loogu talagalay Waxbarashada Sare ama Adeegyada Awoodda Sare si aan u taageerno horumarinta tayada iyo kartida gaarka ah ee ilmahaaga.
Foomka Ogolaashaha Waalidka / Mas'uulka (Ayaa Loo Baahan Yahay)
Hadii aad qabtid wax su`aal ah , Fadlan la soo xiriir xafiiskeena: advlearn@seattleschools.org or 206-252-0130